5min ukuya eRoyal Palace Nordic isitayela w Mekong umbono - I-Airbnb
5min ukuya eRoyal Palace Nordic isitayela w Mekong umbono
I-ifulethi elisevisiwe ephelele ibungazwe ngu-Carrie
I-condo ingumphumela wemizamo ehlanganyelwe ka-Haijun(Umyeni Wami) kanye nami (uCarrie), esisebenze unyaka wonke ekuletheni izingcezu zomdwebo wezandla zibe ngokoqobo.
Wonke ama-condos ethu anokubukwa okungenakuqhathaniswa kwedolobha, izimpawu zalo zezwe kanye nemifula. Ngaphandle kwe-sky gym, i-sauna kanye ne-pool, kunendawo yokudlela ewine indondo kanye nengadi yesibhakabhaka ongadla kuyo ukudla kwasekuseni nokudla, lapho isivakashi sizothola khona amanxusa, izinhlaka zikahulumeni namakhasino ehlezi ngokuzwana eduze komunye nomunye futhi konke ngaphansi kwezinyawo zakhe.
I-condo icishe ibe ngu-130m ukusuka phansi, ichibi lokubhukuda eliphezu kophahla "Ichibi eliphakeme kunawo wonke" ezweni.Izinto ezintathu ezibonakalayo ezichaza ingaphakathi "ukhuni, imabula nelineni eliqinile" kuyilapho ezintathu ezingabonakali "zilula, ziyize. futhi buka".Bekuyinhloso yethu enkulu ukuhlaba umxhwele isiqashi ukuthi izinto eziyiqiniso, eziqine kakhudlwana futhi ezinobungani bemvelo ezinazo zihlale zinqoba imibono engacacile nelahlwayo.
I-condo iphakathi nendawo yedolobha, ibhekene nenxusa lase-Australia.Kuhlala kukhona ama-tuk-tuks phansi futhi alungele ukukuletha noma yikuphi lapho ufuna khona ngaphakathi kwe-$3.Ungabona zonke izinhlobo zezindawo zokudlela kanye namaKhafi anokuthanda kwezwe okuhlukile phakathi kuka-50. amamitha okuhamba.
Sinezinhlu eziningi lapha, zonke eziklanywe ngesitayela esifanayo futhi zingaqashwa nsuku zonke.Sicela uzame ukuhlola zonke izinhlu zami futhi ngikholwa ukuthi izohlale ikhona etholakalayo kuwe.